ကျောင်းသားတပ်မတော်ကမိတ်ဆွေများကို တောင်းပန်တဲ့စာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒီနေ့မှာ အေဘီမြောက်ပိုင်းမှာ မတရားသတ်ဖြတ်ခံပြီး ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် အနှစ် ၂၀ ကြာတော့မှ အများစုပေါင်းတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု ဆုတောင်းတဲ့ ဆွမ်းကျွေးပွဲတွေ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ပြုလုပ်ဖြစ်တယ်။
အဲသည်ဖြစ်ရပ်ကို အနှစ် ၂၀ ကြာမှ ထုတ်ဖော်ပြီး လူအများ သိရှိခွင့်ရတယ်၊ အနှစ် ၂၀ ကြာမှ ဆွမ်းကျွေး ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတယ်။ မတရားစွပ်စွဲပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတာကို အနှစ် ၂၀ ကြာမှ ကျန်ရစ်တဲ့ ရဲဘော်တွေ၊ မိသားစုတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေက အများသူငှာ သိရှိကြစေဖို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်း ၀မ်းသာ ဖြစ်မိတယ်။ ဂုဏ်ယူတဲ့ စိတ်လည်း ဖြစ်မိတယ်။
၀မ်းနည်းတယ်ဆိုတာ သူတို့တတွေဟာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်နေကြရင်း မတရားစွပ်စွဲခံကြရပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံရတာကို ၀မ်းနည်းမိတာ။ ၀မ်းသာမိတယ်ဆိုတာက ဒီလိုမျိုး မတရားမှုတွေ လူမသိ သူမသိ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း မရှိဘဲ အမှန်တရားကို ကျန်ရစ်သူတွေက ဖော်ထုတ်မော်ကွန်းတင်နိုင်ကြရတာ။ ပြီးတော့ ဂုဏ်ယူတယ် ဆိုတာက ကျဆုံးသူတွေကို ကျန်ရစ်သူတွေက တစုတစည်းတည်း အလေးဂရုပြုနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျနော့်အနေနဲ့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကျနော့် သူရဲဘောကြောင်ခဲ့တာ၊ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့မိတာ၊ မျက်နှာလွှဲခဲပစ် နေခဲ့မိတာအတွက် ကျဆုံးခဲ့သူ ရဲဘော်တွေကိုရော ကျန်ရစ်သူ မိတ်ဆွေတွေ၊ ရဲဘော်တွေကို တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
ကျဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာ ကျနော်နဲ့ တိုက်ရိုက် သိကျွမ်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ မပါခဲ့သော်လည်း ကျဆုံးခဲ့သူတွေဟာ ၈၈ အရေးတော်ပုံ ရဲဘော်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူတွေထဲမှာ ကျနော်နဲ့ တိုက်ရုိုက်သိကျွမ်းတဲ့သူတွေပါတယ်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံကတည်းက မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခုလည်း ဖြစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ဇော်မင်း (စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော်) ကို သက်သေထားပြီး ပြောရရင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကိုစုိုးလင်း၊ ကိုရဲလင်းတို့ကို ကျနော် သိကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မှာ သမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုတွေထဲက မိတ်ဆွေတွေကို သက်သေပြုပြီး ပြောရရင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကိုကျော်နိုင်ဦးကို ကျနော် သိကျွမ်း ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ဆက်စပ်ပြီး မိတ်ဆွေဖြစ် သိကျွမ်းလာတဲ့ လက်ရှိ ကျနော်မိတ်ဆွေတွေက ကျန်ရစ်သူ ပန်းချီကိုထိန်လင်းနဲ့ ကိုနေ၀င်းအောင်တို့ ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေအတွက် ကျနော်ဟာ သည်အဖြစ်အပျက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တင်ပြဖို့ ကျနော် ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်။ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်း မှတ်တမ်းပြုစုခဲ့သော်လည်း သတင်းစာမျက်နှာမှာ တင်ဆက်ဖို့ အချိန်ဆွဲခဲ့သူ ပျက်ကွက်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့တကွ အားလုံးကို ကျနော် တောင်းပန်ပါတယ်။ သုို့သော်လည်း ဒီတောင်းပန်စာကို ရေးသားရင်းနဲ့ပဲ မတရားစွပ်စွဲပြီး ဖမ်းဆီး ခံရသူတိုင်းအတွက်၊ မတရား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသူတိုင်းအတွက် ကျနော်တို့အားလုံးဟာ အချိန်မဆုိုင်းဘဲ တတ်နိုင်သမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး အမှန်တရားဖက်က မကြောက်မရွံ့ ရပ်တည်သင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
၁၉၉၂ တုန်းက ကိုကျော်နိုင်ဦးကို အေဘီမြောက်ပုိုင်းမှာ ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွတ်စွဲပြီး ဖမ်းဆီးထားတယ်။ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က သွားရောက်ပြီး မဟုတ်တဲ့အကြောင်း အထောက်အထားတွေပြသပြီး တောင်းဆုိုနေရတယ် ကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်အချိန် ဖမ်းဆီးစွတ်စွဲသူကိုယ်တိုင်က ကျနော်တို့ မန္တလေးမှာ အရေးတော်ပုံရဲဘော်တဦးအနေနဲ့ သိကျွမ်းခဲ့တဲ့ ကိုအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်တယ်လို့ ကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ဒါကို စစ်အစုိုးရရဲ့ မျက်လှည့်တွေ၊ စစ်ဆင်ရေးတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ လိမ်ညာလုပ်ကြံ ၀ါဒဖြန့်တာလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ အဲသည်လိုမျိုး ကျနော်အသိဥာဏ်တွေ ထုံထိုင်းညံ့ဖျင်းခဲ့တာကို တောင်းပန်ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စစ်အစုိုးရနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ အန်အယ်ဒီပါတီဝင်တွေကို မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း ဒီပဲယင်းမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲသည်မှာ ပါတီဝင်တွေ အများအပြား ဒဏ်ရာရ သေကြေပျက်စီးကြတယ်။ အချို့က နယ်စပ်ကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်။ အဲသည် လုပ်ကြံမှုကို ကျနော်တို့ မိုးမခမီဒီယာ စတင်ထူထောင်ပြီး လပိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားတာ ဖြစ်တယ်။ အဲသည် လုပ်ကြံမှုကြီးကို ကျနော်တို့ ခါးခါးသီးသီး ထုတ်ဖော် ဝေဖန် ရှုပ်ချတယ်။ ဒီမတရားမှုကြီးကို အမြဲတမ်း မပျေက်မပျက် မမေ့မလျော့ ကျနော်တို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုနေဆဲ ဖြစ်တယ်။ အဲသည်ကျမှ ကျနော် အေဘီမြောက်ပိုင်း လုပ်ကြံမှုကြီးကို ပြန်ပြီး ခေါင်းထဲ ၀င်လာတယ်။
အဲသည်အချိန်မှာ ကျနော် သိခဲ့ရတာက အေဘီမြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌ အောင်နိုင်က သူ့နဲ့ မန္တလေးမှာကတည်းက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုစိုးလင်းကို ဖမ်းဆီးပြီး ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ် သတ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ ကြားခဲ့ရတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာလည်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုစိုးလင်း သေဆုံးသွားပြီလို့ မှတ်ယူပြီးတော့ ဆက်လက် စုံစမ်းဖို့ အမှန်တရားကို ရှာဖွေဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာကို တောင်းပန်ပါတယ်။
အဲသည်နောက်ပိုင်း ၂၀၀၆ လောက်ကျမှ ပန်းချီကိုထိန်လင်းအကြောင်းကို ကျနော် ကြားပါတယ်။ ကိုထိန်လင်းက မြောက်ပိုင်းကို တောမခိုခင်မှာ အိန္ဒိယပြည်ဖက်မှာ ကျောင်းသားတပ်မတော်တရပ် ထူုထောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ တောခိုခဲ့ဖူးတာကိုး။ အဲသည် တောခိုဖို့ မဟာမြိုင်တောကြီးထဲဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကိုထိန်လင်းကို ကျနော် သိရှိသွားတယ်။ ပြီးတော့ အနောက်ဖက်က ကျောင်းသားတပ်မတော်ထူထောင်ရေးက အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့နောက် ကိုထိန်လင်း မြောက်ပိုင်းအေဘီရောက်သွားတယ်။ သူလည်း ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ် စွတ်စွဲခံရပြီး နောက်တော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ။် သို့သော် စစ်အစုိးရက ဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်တယ်။ နောက်မှ ပြန်လွတ်ပြီး ထူးခြားတဲ့ အနုပညာရှင်တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လာတယ်လို့ သိရတယ်။ အေဘီမြောက်ပိုင်းနဲ့ ရေစက်ပါတဲ့ သူတယောက်အကြောင်း သိရဲ့သားနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျနော် လေ့လာစုဆောင်းဖို့ ကျနော် ပေါ့ဆခဲ့တာအတွက် ကျနော့်မှာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၂၀၀၇ နှစ်ဦးမှာမှ ကျနော် ကိုနေ၀င်းအောင်နဲ့ ဆုံပါတယ်။ ကိုနေ၀င်းအောင်က ၈၈ အရေးတော်ပုံတုန်းက မြန်မာစာဆရာ၊ နောက်တော့ တောင်ပိုင်းအေဘီမှာ တောခို။ သူလည်းပဲ တောင်ပိုင်းအေဘီက ဥက္ကဋ္ဌ ကိုနိုင်အောင်လက်ထက်မှာ ၁၉၉၂ က ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ် ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း ခံရတဲ့သူလို့ သိလာရတယ်။ အမေရိကား ရောက်နေတာတောင် တောထဲက ထွက်ပြေးလာတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းလို့ လူတချို့က သမုတ်လေ့ရှိတဲ့ ကိုနေ၀င်းအောင်ကို ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာ ဦးတင်မိုးက စကားကြုံတိုင်း မိတ်ဆက်ပေးနေလို့ ရင်းနှီးနေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုနေ၀င်းအောင်နဲ့ စကားစပ်မိတော့မှ ကိုနေ၀င်းအောင်ပြောပြတဲ့ အေဘီ တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းက မတရားစွပ်စွဲလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေကို သိလာရတယ်။ အဲသည်မှာမှ ကိုရဲလင်းကို မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုကျော်နိုင်ဦးတို့လိုပဲ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲသည်မှာမှ ကိုစုိုးလင်း မသေဘူးဆိုတာ သိရတယ်။ ဘယ်သေမှာလဲ။ ကိုစုိုးလင်းကို ထောက်လှမ်းရေးဆိုပြီး မြောက်ပိုင်းက ကြေးနန်းပို့လို့ ကိုနေ၀င်းအောင် ကိုယ်တိုင် တောင်ပိုင်းမှာ ရောက်နေတုန်း ဖမ်းခဲ့ရတာကိုး။ နောက်တော့ ကိုနေ၀င်းအောင်လည်း ထောက်လှမ်းရေးလုံးလုံးအဖြစ် စွတ်စွဲခံရပြီးတော့ ကိုစုိုးလင်းနဲ့ အတူတူ ကျင်းတကျင်းထဲမှာ ခြေကျဉ်းချ အဖမ်းခံ၊ အနှိပ်စက်ခံ၊ အသတ်ဖြတ်ခံရလုနီး ဖြစ်ခဲ့ရတာကို ကျနော် သိရပါတော့တယ်။
ကိုနေ၀င်းအောင်၊ ကိုစုိုးလင်းနဲ့ နောက်ရဲဘော်တဦးတို့ အသက်လုပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာ။ နောက်တော့ ကိုစုိုးလင်းက နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ဝင်သွားတာ။ ကိုနေ၀င်းအောင်ကတော့ ဘန်ကောက်မြို့တ၀ိုက်မှာ ဇာတ်မြုပ်နေထိုင်ရင်း လောကဓံကို ခါးစည်းခံခဲ့ရတာတွေကို ကြားသိရပါတယ်။ ကိုနေ၀င်းအောင်တယောက် အမေရိကားကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီး ဆယ်စုနှစ် ၁ခု နီးပါး အကြာ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ အေဘီ တောင်ပုိုင်း၊မြောက်ပိုင်း လုပ်ကြံမှုတွေကို ကျနော် အတော်အသင့် သိလာရတယ်။ ကိုယ့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရဲဘော်တွေ ဘယ်လုိုမျိူး ကျဆုံးခဲ့ကြတယ်။ အသက်လုပြီး လွတ်မြောက်ကျန်ရစ်ကြတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။
အဲသည်တုန်းကလည်း မှတ်စု မှတ်တမ်းတွေ ယူထားခဲ့သော်လည်း ဒါတွေကို ထုတ်ဖော်ဖို့ ကျနော် လက်နှေးခဲ့တယ်။ အရေးတော်ပုံ လှုပ်ရှားမှုတွေထဲက မိမိတို့ရဲဘော်တွေ သေကြေပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ လုပ်ကြံမှုကြီးကို ထုတ်ဖော်ဝန်ခံ ပြောကြားဖို့ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သူရဲဘောကြောင်ပြီး တွန့်ဆုတ်နေခဲ့မိပါတယ်။
၂၀၀၈ ထဲမှာမှ ကိုထိန်လင်းနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ သူ့ဖက်က အတွေ့အကြုံတွေကို သိရှိလာရတယ်။ ကုိုကျော်နိုင်ဦးက သူနဲ့ မရှေးမနှောင်း ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။ စစ်အစုိးရက ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်း သိရတယ်။ ကာယကံရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုနေ၀င်းအောင်နဲ့ ကိုထိန်လင်းတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ပြန်လည် ထုတ်ဖော်ရေးသားဖို့ကို ကျနော် မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲကာလတလျောက်လုံး နှစ်ပေါင်းများစွာ အဲသည် မတရားမှုကို ထုတ်ဖော်ဖို့၊ အမှန်အတိုင်းပြောဖို့ကို မြိုသိပ်ပြီး ဇာတ်မြှပ်နေထိုင်ကြတဲ့ ကျန်ရစ်သူရဲဘော်တွေ၊ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ ကိုိုစိုးလင်း၊ ကိုရဲလင်း၊ ကိုကျော်နိုင်ဦးတို့ကို ရှာဖွေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး သဘောထားတောင်းဖို့ ကျနော် မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကာယကံရှင်တွေကိုသာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြဖို့ကို တိုက်တွန်းတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်မိခဲ့တယ်။
အဲသည်နောက်ပုိုင်းမှာ ကိုထိန်လင်းနဲ့ သူ့အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အင်တာဗျုးလေး ဘာလေးလုပ်တယ်။ အဲသည်မှာ သူပြောပြတဲ့ လူနည်းစုလေး တစုအတွက် သူတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ အနုပညာဆိုပြီး (သူ့ရဲ့ လူကက်ဆက်အကြောင်းပေါ့) သူပြောပြတာလေးကို နည်းနည်းပါးပါးရေးခဲ့မိတာပဲ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ထဲ ချိုတူးဇော် အမေရိကား အလည်ရောက်လာတော့မှ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မြိုသိပ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို မိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို တိုင်ပင်မိတယ်လေ။ သူကိုယ်တိုင်နဲ့ သိကျွမ်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအကြောင်း သူသိသမျှနဲ့ ကိုယ်သိသမျှ ဖလှယ် ပြောဆိုကြတာပေါ့။ ကိုစိုးလင်းနဲ့ သူနဲ့က ရန်ကုန်မှာ မန္တလေးမှာ ပြန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီ။ သူ့မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းလဲ သူ သိရှိခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီဖက်က ကာယကံရှင်တွေအကြောင်းလည်း တဖက်သံကြားနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ သူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံ သိရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။
အဲသည်နောက်ပိုင်းမှာ စာဖတ်သူတွေ သိတဲ့အတုိုင်းပါပဲ။ ကိုထိန်လင်းကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ရေးသားလာတယ်။ မန္တလေးသား အောင်မိုးဝင်းကလည်း သူစုံစမ်းသိရှိသမျှ မြောက်ပိုင်းလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများကို ထုတ်ဖော်ရေးသားလိုက်တယ်။ အနှစ်နှစ် အလလက သိမ်းဆည်းမြိုသိပ်ထားကြတဲ့ မှတ်တမ်းတွေ၊ အထောက်အထားတွေဟာ ပြည်တွင်း ပြည်ပကနေ နေရာအသီးသီးကနေ ပေါ်ထွက်လာကြတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်တွေ၊ ဘလောဂ့်တွေကနေ စာရေးသူတွေက ထုတ်ဖော်ရေးသားလာကြတယ်။
ယခုတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာတဲ့ နှစ်ပတ်လည်မှာ နိုင်ငံတကာမှာ၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အများပြည်သူတွေ၊ ကျန်ရစ်သူရဲဘော်တွေ၊ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေ အားလုံး အတူတကွ စုဝေးကြလို့ ကျဆုံးခဲ့သူ ရဲဘော်တွေကို ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု အထိမ်းအမှတ်ပြုကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်ရစ် အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ဖက်က အဲသည်တုန်းက ဖြစ်ရပ်ကို စုံစမ်းသိရှိထားရက်နဲ့၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုယ်တိုင် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ရက်နဲ့၊ သိရှိသလောက် မှတ်တမ်းရှိသလောက် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မပြုဘဲ မောဟအမိုက်မှောင်ဖုံးပြီး တွေဝေခဲ့မိတာကို ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။
သို့သော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အားလုံးသော ကာယကံရှင်များ၊ မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုနဲ့ တင်ပြနိုင်ခဲ့တာ အများပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က ဒီအကျဉ်းတန်ဖြစ်ရပ်ကြီးကို တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်စွာ လက်ခံသိရှိခွင့်ရကြတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်။
အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရင်း ကျဆုံးခဲ့သူ၊ အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသူတိုင်း သူရဲကောင်းတိုင်းအတွက် အမိမြန်မာပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ အသိအမှတ်ပြုတယ်၊ အတူတကွ ရပ်တည်ကြတာအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
17 Responses to ကျောင်းသားတပ်မတော်ကမိတ်ဆွေများကို တောင်းပန်တဲ့စာ
linnmgmg on February 11, 2012 at 9:12 pm
၈၈ မျိုးဆက် on February 11, 2012 at 9:20 pm
ကျေးဇူးပါကိုမောင်ရစ်။ အခုလို ထုတ်ပြောဖော်ရတဲ့ အတွက် ခံရသူတွေကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ အေဘီရဲ့ မြောက်ပိုင်းဇတ်လမ်းအပေါ်မှာ တာဝန်မရှိသူတွေကလည်း ကိုမောင်ရစ်လို စာတွေရေးလာရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ
Mon on February 11, 2012 at 9:29 pm
Condemned, MY!!! How can you apologize those who are already gone?? Terribly sad for those heros and heroine who were murdered while doing right things and sacrifices….
jojo on February 11, 2012 at 9:46 pm
ဘာ့ကြောင့်လက်နှေးနေကြတာလဲ… ဒီလုပ်ကြံခဲ့မှု့တွေအတွက်… ဘယ့်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ကြတာပဲ… ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင်ပြကြပါ… လက်ရှိကျောင်းသားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမှာ တာဝန်ယူနေသူတွေပါမှာပေါ့… အရေးယူပေးကြပါ… စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်က အာဏာရှင်ဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါလား… ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရက်စက်မှု့တွေပဲ
tinoo on February 11, 2012 at 9:55 pm
ကျနော်လဲ ဂဂ အရေးတော်ပုံမှာ နာရီ ၅၀ အစာငတ်ခံခဲ့ပါတယ် အဖမ်းခံရရင်လည်းခံမယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့အဖမ်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ ကိုယ့် ရဲဘော်အချင်းချင်းကူညီဖို့ ဘဲစိတ်ရှိပါတယ်။ ချောက်တွန်းဖို့ ကိုတော့လုံးဝပါဘဲ ၊အခုလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နယ်စပ်ကိုရောက်သွားကြရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကျောင်းသားအချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းမယ်စိတ်မထားဘဲနဲ့ ချောက်ချဖို့ ကိုယ်အနေချောင်ဖို့ အတွက် ကိုယ့်ရဲဘော်တွေကို ဒါးစာခံလုပ်ခဲ့ကြတာကိုတော့ ရင်နာလို့ မဆုံးပါဘူး။ (ဂဂ)နောက်ပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတဲ့ အမှားနဲ့ အမှန်မချင့်ချိန်ဘဲလုပ်ခဲ့ကြသူတွေကိုအခုချိန်မှာဘယ်လိုသဘောထားရမလဲ။အခုချိန်ကျမှဘယ်လိုဘယ်ညာဆိုတာ တွေကိုကောဘယ်လိုသဘောထားရမလဲ။မြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်ဓါတ်ပြင်ဖို့ ကိုယ့်အမျိုးကို ကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်တိုးတက်ေ၇းအတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်ထားရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြဖို့ လိုမလိုဆိုတာ။
mg pyi khaing on February 11, 2012 at 10:31 pm
ဒီမိုကရေစီခရီးရှည်ကြီးမှာ ရိုးသားရဲရင့်တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ ကြီးမားစွာပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲ… ကျောင်းသားဆိုတာ စစ်တုရင်ထဲက နယ်ရုပ်တွေပါ.. နေရာယူကြတော့ သူတို့ပါယိုး ထုံးစံမရှိပါဘူး.. ပေးဆပ်သူ သက်သက်ပါ.. သူတို့ရဲ့ ခံယူချက်သတ္တိတွေကို မမေ့မလျော့ လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။
ngunjawa အင်ဂွန်ဂျာဝါ on February 11, 2012 at 10:36 pm
k2 on February 11, 2012 at 11:17 pm
i would kike to know more about what happening in the ABSDF(NORTH) Please
ရွှေသွေး on February 12, 2012 at 2:36 am
စိုးလင်းမသေဘူးဆိုတာ အခုတလောမှသိရလို့ ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ် (အရင်က သူအသတ်ခံရတယ်လိုကြားထားတာ)။ သူက ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တာ ငါတို့ တတန်းလုံး ငါတို့တကျောင်းလုံးသိတယ်၊ ငါရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်ပါ။ မောင်ရစ်ရေ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီကိစ္စကို facebook အကောင့်တခုသီသန့်တခုဖွင်ြ့ပီးတင်သင့်တယ်။ မြောက်ပိုင်းရော တောင်ပိုင်ရောအတွက်။ အဲဒါဆိုရင် သက်ဆိုင်တဲသူတိုင်းက သိတဲသူတိုင်းက အချက်အလက်တွေပေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ကိုဇော်ထွန်း (ဆေး၂) ဘာလိုအသတ်ခံရလဲဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပေးပါအုံး။ သူညီးကတော့ တောထဲကပြန်ရောက်ထဲက စိတ်မမှန်းတော့ဘူး။
ကိုမျိုး on February 12, 2012 at 5:31 am
နဲနဲပါးပါး ပါးစပ်လေးဘာလေး ဟပါဦးလား။
bay on February 12, 2012 at 5:54 am
မရှင်းလို့ မေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ ကိုမောင်ရစ်က လဲကျောင်းသားတပ်မတော်က ပဲလား ။ ကိုမောင်ရစ်က ABSDF ကို အခုထိ တရားဝင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူပါဟုတ်ပါ သလား။ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်က ကျောင်းသားတပ်မတော်က မိတ်ဆွေများကို တောင်းပန်တဲ့စာ ဆိုလို့ ABSDF ကိုယ်တိုင်က တောင်းပန်စာ ထုတ်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ ကိုမောင်ရစ် ၇ဲ့ တောင်းပန်စာ ဟာ အခုABSDF ကိုဘယ်လောက်အထိ ကိုယ်စားပြုပါသလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ရင်ဒီဆောင်းပါးကို ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲ့ တောင်းပန်စာ ဆိုတဲ့အစား မောင်ရစ်တောင်းပန်စာလို့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းပေးသင့်ပါကြောင်း။
soe88 on February 12, 2012 at 8:23 am
ကိုမောင်ရစ်..ဒီစာဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ တောင်းပန်းစာမှမဟုတ်ပဲ.ခင်ဗျာ့ရဲ့တကိုယ်ရည်တောင်းပန်းစာပဲ.မကဒတ က စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့မယ်လို့ ပြောတာကလွဲလို့ ဘာမှမပြောသေးဘူး..ဒါကြောင့် ဒီနံမည်မတပ်သင့်သေးဘူး…
ကျနော်လဲ မကဒတ ရဲ့ဘော်ဟောင်းတဦးပါ..သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ကျနော်စောင့်မျှော်နေပါတယ်..ပြောစရာတွေက ရင်ထဲမှာအပြည့်ပဲ..မတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် ပြေးစရာမြေမရှိပါဘူး…
yune on February 12, 2012 at 10:31 am
ကိုမောင်ရစ်က ကျောင်းသားတပ်မတော် ကိုယ်စားတောင်းပန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော်များကို သူက တောင်းပန်တဲ့စာပါ။
Lun Lunn on February 12, 2012 at 10:49 am
bay on February 12, 2012 at 5:54 am နဲ့ soe88 on February 12, 2012 at 8:23 am …
ကျွန်တော် ဖတ်ပြီး နားလည်တာကတော့ “ကျောင်းသားတပ်မတော်က မိတ်ဆွေများကို” ဆိုတာ ကျောင်းသားတပ်မတော်မှ မိတ်ဆွေများကို လို့ ရေးတာပါ။ ဒီနေရာမှာ “က” က English လိုဆိုရင် From အနေနဲ့ သုံးလိုက်တာပါ။
“ကျောင်းသားတပ်မတော်က မိတ်ဆွေများကို” လုိ့ ရေးလိုက်လို့ နည်းနည်း အဓိပ္ပါယ်ရောသွားတာလို့ ယူဆပါတယ်။
ohnmar on February 12, 2012 at 8:09 pm
life on February 13, 2012 at 11:33 am
what about muder five student and kyaw za ya(101)ABSDF?
KoKo on February 14, 2012 at 11:31 am
You are welcome to makeacoward commitment. I always assume you wereadutiful media man whose always able to surf better news network than any other ordinary internet users. You can pay back by promotingacampaign for justice. Tribunal will hang those disgraceful guys whoever yours or mine. That wasawar crimes against humanity.